Taageerayaasha Kooxda Liverpool oo ka walaacsan badalkii lagu sameeyey Sadio Mane kulankii xulkiisa Senegal uu guusha ka gaaray Eswatini – Gool FM
(Liverpool) 18 Nof 2019. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Liverpool ee Sadio Mane ayaa badal lagu sameeyey kulankii xulkiisa qaranka Senegal uu guusha ka gaaray Eswatini, Jamaahiirta kooxdiisa Reds ayaana walaac daran ka muujiyey arrintaas.
Sadio Mane ayaa badal looga saaray kulankii xulkiisa Senegal uu 4-1 uga adkaaday Eswatini, laakiin laacibka Liverpool ayaan dhaawac ahayn.
Taageerayaasha kooxda Reds ayaa ka wal-walay markii ay arkeen Weeraryahankooda oo garoonka badal looga saarayo kulankii xulkiisa qaranka Senegal uu guusha ka gaartay Eswatini, laakiin waxaa la shaaciyey inay ahayd arrintaasi go’aan farsamo.
Mane ayaa ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan macallin Jurgen Klopp xilli ciyaareedkan illaa iyo hadda, waxaana uu 27-sano jirkaan dhaliyey 11 gool, isagoo caawiye ka ahaa labo gool oo kale tartammada oo dhan.
Inkastoo uu ku soo bilowday kulankan ka tirsanaa isreeb-reebka koobka qarammada Afrika ayaa haddana la badalay qeybtii labaad ee ciyaarta, iyadoo taageerayaasha kooxda Liverpool ay ka cabsadeen in xiddigooda uu dhaawac soo gaaray.
Si kastaba ha ahaatee, goor dambe ayaa shaaca laga qaaday in sababta loo badalay laacibkan ay ahayd in laga cabsaday in garoonka laga saaro oo kaarka casaaska ah la tuso, Mane ayaana qeybtii hore kaarka digniinta ah la siiyey kaddib markii uu dhowr qalad ku galay xiddigihii ka soo horjeeday isagoo careysan.
Tababare Aliou Cisse ayaana sidaas awgeed go’aansaday inuu badal ku sameeyo ciyaaryahanka kooxda Liverpool si uu xaaladdiisa u dajiyo, isla markaana uusan laacibku ganaax uga maqnaanin kulammada ku soo aaddan.
Sidaas darteed, Mane ayaa la soo sheegayaa inuu ku soo bilaaban doono kulanka kooxdiisa Liverpool ay ka horjeedo Sabtida Naadiga Crystal Palace, taas oo farxad wayn u noqon doonta tababare Jurgen Klopp, kaasoo ka baqdin qaba in dhowr ciyaaryahan oo kooxdiisa ah ay ka maqnaadaan kulankaas, kuwaasoo dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaareen ciyaaraha caalamiga ah ee dalalkooda.
Mohamed Salah, Joe Gomez, Jordan Henderson, Virgil Van Dijk iyo Andy Robertson ayaa dhammaantood laga saaray waajibaadka xulalkooda qaranka, waxaana dhammaantood shaki laga galinayaa kulanka ka dhacaya garoonka Selhurst Park.